राजेन्द्र महर्जन का लेखहरु
राजेन्द्र महर्जन, कार्तिक २१, २०७४
दस दिनसम्म विश्वका बसिखाने शासक वर्गको सत्ता हल्लाउने महाभूकम्प थियो, सोभियत क्रान्ति । रूसमा भएको क्रान्तिले विश्वकै एक साम्राज्य जारशाहीको अन्त्यसँगै पुँजीवादी सरकारलाई गल्र्याम–गुर्लुम ढालेको थियो ।
राजेन्द्र महर्जन, कार्तिक ७, २०७४
स्मृति र मिथक निकै बलिया र प्रभावशाली हुन्छन्, कहिलेकाहीँ इतिहासलाई नै माथ गर्ने । धेरैजसो इतिहास लिपिबद्ध हुन्छ र लेखनमा शासक वर्गकै प्रभुत्व हुन्छ । आफ्नै वर्गका स्मृति र मिथकलाई नै इतिहासको रूपमा लेखिन्छ ।
कस्तो कम्युनिस्ट, कस्तो वामपन्थी ?
राजेन्द्र महर्जन, आश्विन २४, २०७४
दसैंपछि नेपालको राजनीतिक बजारमा सबभन्दा विनिमय भएका शब्द हुन्, ‘वाम–एकता ।’ नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति नेपालले चुनावी तालमेलको घोषणा अप्रत्यासित रूपमा गरेपछि वाम–एकता शब्दले आकाश छोएको हो ।
राजेन्द्र महर्जन, आश्विन १०, २०७४
कार्लमाक्र्सलाई सबैभन्दा मनपर्ने उक्ति हो : ‘डाउट एभ्रिथिङ’ अर्थात् सबै चिजमाथि सन्देह गर ।’ आफूलाई माक्र्सवादी ठान्ने नेपाली कम्युनिस्टहरू भने सन्देहदेखि दस हात पर भाग्छन् ।
राजेन्द्र महर्जन, भाद्र २७, २०७४
आफू बसिरहेको देश नै आफ्नो देश भएन भने कस्तो अनुभूति हुन्छ ? आफ्नै भूमिमा कुनै नागरिक हैसियतबिना बाँच्नुपर्‍यो भने कस्तो पीडा हुन्छ ? राज्यले नै दुव्र्यवहार गर्‍यो भने कस्तो दु:ख हुन्छ ?